တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း အောင်စာရင်းရလဒ်အလိုက် နားထောင်သင့်တဲ့ kpop သီချင်းများ
တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း ဖြေဆိုထားတဲ့ ကျောင်းသားကျောင်းသူလေးတွေရဲ့ ခံစားချက်အမျိုးမျိုးကို တွေ့နေရပါတယ်။ စာမေးပွဲဆိုတဲ့ သဘောတရားကတော့ အောင်မြင်သူ ကျရှုံးသူတွေရှိတာ ထုံးစံဖြစ်တာမို့ ကိုယ့်ရဲ့ရလဒ်အလိုက် နားထောင်သင့်တဲ့ kpop သီချင်းတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
၁။ Happiness (Red Velvet)
မျှော်မှန်းထားသလို ရလဒ်ထွက်လာသူတွေ၊ မျှော်မှန်းထားတာထက်တောင် ပိုတဲ့ရလဒ်ကြောင့် ဝမ်းသာမဆုံးဖြစ်နေရတဲ့ ကလေးတွေအတွက်တော့ ဒီနေ့မှာ တစ်လောကလုံးကို ပိုင်ဆိုင်လိုက်ရသလို ခံစားမှုမျိုးနဲ့ မြင်မြင်သမျှအားလုံးဟာ လှပနေမှာပါပဲ။ ဒီအချိန်မှာ Happiness သီချင်းလေးနဲ့ ပျော်ရွှင်မှုကို ထပ်ဆောင်းလိုက်ပါ။
၂။ Eat (Zion.T)
ရလဒ်က ကျေနပ်စရာကောင်းသည်ဖြစ်စေ မကောင်းသည်ဖြစ်စေ တစ်နှစ်ပတ်လုံး စိတ်ရောကိုယ်ရော အထိုက်အလျောက်ပင်ပန်းခဲ့မှာပါပဲ။ ဒါကြောင့် “ဒီသီချင်းလေးကို ချောကလက်လေးလိုမျိုး ဖောက်စားလိုက်ပါ” ဆိုတဲ့ သီချင်းချိုချိုလေးကို နားထောင်ပြီး ကိုယ့်ကိုကိုယ်အားပေးလိုက်ပါနော်။
၃။ NO (BTS)
ဂုဏ်ထူးတွေကလဲ အများကြီးထွက်ပြီ၊ အမှတ်ကလဲ ကောင်းမှာသေချာနေပြီ ဒါပေမယ့် မိဘတက်စေချင်တဲ့တက္ကသိုလ်နဲ့ ကိုယ်ဝါသနာပါရာနဲ့ ဆန့်ကျင်ဖက်ဖြစ်နေတဲ့အခါ “ဘယ်သူ့ရဲ့ထိန်းချုပ်မှုကြောင့်မှ ကိုယ့်ရဲ့စိတ်အားထက်သန်မှုကို လွှမ်းမိုးမခံဘူး” လို့ ရေးဖွဲ့ထားတဲ့ ဒီသီချင်းကို အသံကုန်ဖွင့်ပြီး နားထောင်လိုက်ပါ။ ပြီးရင်တော့ မိဘပို့တဲ့ တက္ကသိုလ်ကိုပဲ ရောက်ဖို့ရာခိုင်နှုန်းများတာမို့ စိတ်ကိုပြင်ဆင်လိုက်ပါတော့။ (နောက်တာပါ)
၄။ Breathe (Lee Hi)
ကိုယ်မှန်းထားသလောက် ဂုဏ်ထူးမထွက်တဲ့အခါ ဒါမှမဟုတ် ကျရှုံးသွားတဲ့အခါ ဘဝမှာ မျှော်လင့်ချက်တွေ ပျောက်ဆုံးသွားသလို ခံစားရမှာ အသေအချာပါပဲ။ ဒီလိုအချိန်မှာတော့ Lee Hi ရဲ့ ဒီသီချင်းလေးကို နားထောင်၊ အသက်ကိုဝဝရှူပြီး ရှေ့ဆက်လျှောက်ရမယ့်ဘဝအတွက် နောက်တစ်ခါ တိုက်ပွဲဝင်ဖို့ အားမွေးလိုက်ပါ။
၅။ That’s Okay (D.O.)
ရလဒ်က မကောင်းခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့ ပြန်လဲပြင်ဆင်လို့မရတော့မယ့် အရာတစ်ခုအတွက် ငိုကြွေးပစ်လိုက်လို့ ရပေမယ့် ပြန်တော့ကြိုးစားရပါမယ်။ D.O. ရဲ့ အသံချိုချိုလေးနဲ့ ဒီသီချင်းက လူ့သဘာဝအရ ဖြစ်ပေါ်တတ်တဲ့စိတ်ရဲ့အတက်အကျတွေကို သီဆိုပြထားတာမို့ နှစ်သိမ့်ရာလေးတစ်ခုတော့ ဖြစ်စေမှာပါ။
၆။ Bbi Bbi (IU)
ကိုယ့်ရဲ့ အောင်စာရင်းရလဒ်ကို ကိုယ်ကိုယ်တိုင်တောင် မကျေနပ်လို့ စိတ်ညစ်နေရတဲ့ကြားထဲ ပတ်ဝန်းကျင်ကပါ ထပ်ပြီးထိုးနှက်နေမယ်ဆိုရင်တော့ “သူများအကြောင်းကိုစပ်စုတာလဲ စည်းလေးစောင့်ပေးပါ” ဆိုတာကို ထုတ်ပြောဖို့ခက်တဲ့အခါ ဒီသီချင်းကိုသာ နားထောင်လိုက်ပါတယ်။ စာသားလေးတွေက ထိမိနေမှာ အသေအချာပါပဲ။
၇။ How You Like That (BLACKPINK)
ကိုယ့်ကိုအမြဲအထင်သေးတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ကသူတွေကို သူတို့မထင်မှတ်တဲ့ ရလဒ်နဲ့အောင်မြင်ခဲ့ပြီဆိုတာ သက်သေပြနိုင်ခဲ့ပြီဆိုရင်တော့ ဒီအချိန်ဟာ ‘Ha How You Like That’ လို့သာ အော်ပြီး ကိုယ့်ရဲ့အောင်မြင်မှုအတွက် ဂုဏ်ဆာပြရမယ့် အချိန်ပါပဲ။
ထွက်ရှိလာတဲ့ ရလဒ်တွေအရ Myanmar Cele Bar အဖွဲ့သားများက အောင်မြင်ခဲ့တဲ့သူတွေအတွက်လဲ ထပ်တူဝမ်းမြောက်ရသလို ကျရှုံးခဲ့သူတွေအတွက်လဲ အားမလျော့ကြဖို့ တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်နော်။
← ခင်ပွန်းသည်နဲ့ ကွာရှင်းပြတ်စဲတော့မယ့် မင်းသမီး Hwang Jung Eum
အလှအပနဲ့ပတ်သတ်ရင် IU တောင် အားကျရပါတယ်ဆိုတဲ့ အမျိုးသမီး idol →